Ukufumana kwakhona DWG Ukuzoba kwiTemporary Iifayile
Ikhaya iimveliso DataNumen DWG Recovery Ukufumana kwakhona DWG Ukuzoba kwiTemporary Iifayile
Xa inqaku lokuGcina ngokuzenzekelayo lenziwe lasebenza kwi-AutoCAD, iya kuthi yenza iifayile zokugcina ngokuzenzekelayo xa kusenziwa umzobo. Ngokuzenzekelayo, iifayile zokugcina ziya kugcinwa kwitempo yeWindowsrary isikhombisi kunye nezandiso zefayile zi .sv $.
Xa kwenzeka intlekele yedatha, umzekelo, i-AutoCAD yengozi okanye ipheliswe ngokungaqhelekanga ngexesha leseshoni, unokufumana kwakhona idatha egcinwe kuyo.sv $ iifayile ngokufumana ifayile yokugcina ngokuzenzekelayo, ithiya igama.sv $ ulwandiso ukuya .dwg emva koko uvule loo fayile kwi-AutoCAD. Ifayile yokugcina ngokuzenzekelayo iya kuba nayo yonke imininingwane yokuzoba okokugqibela ukugcinwa kwe-autosave.
Ukuba i-AutoCAD inika ingxelo ngempazamo xa kuvulwa ifayile egcinwe ngokutsha, oko kuthetha ukuba ifayile yokugcina ngokuzenzekelayo ikhohlakele okanye yonakele ngenxa yentlekele yedatha.
I-AutoCAD inomyalelo owakhelweyo we “Buyisela” onokusetyenziselwa ukubuyisa ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo yokugcina ngokuzenzekelayo, ngolu hlobo lulandelayo:
Khetha imenyu Ifayile> Izixhobo zokuzoba> Buyisa kwakhona
Kwibhokisi yencoko yababini beFayile (ibhokisi yefayile yencoko yababini), faka igama lefayile elonakeleyo okanye elonakeleyo okanye ukhethe ifayile.
Iziphumo zokufumana kwakhona ziboniswa kwiwindow yokubhaliweyo.
Ukuba ifayile inokuphinda ifumaneke, iya kuvulwa kwakhona kwiwindow ephambili.
Ukuba ifayile ayinakufunyanwa yi-AutoCAD, unokusebenzisa imveliso yethu DataNumen DWG Recovery ukulungisa ifayile ye-autosave eyonakeleyo kunye nokusombulula ingxaki.
Isampulu yokugcina ifayile: isampulu_autosave.sv $
Ukuqonda ukugcinwa kwe-AutoCAD kunye nokugcina iifayile ngokuzenzekelayo